Tatitry ny Media Japoney, Manamaivana Ireo Niharan’ny Fandefonana Tao Amin’ilay Trano Fikarakaràna Sembana Ao Sagamihara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Marsa 2017 3:23 GMT
Tsy nisy lohateny. Sary an'i Hinata-sennin, mpampiasa Flickr. Lisansa: CC BY 2.0.
Ny Zoma 24 Febroary, 2017, namoaka didy fiampangana mahakasika vesatra maro ny biraon'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Distrikan'i Yokohama, tafiditra amin'izany ireo fiampangàna famonoana olona sy fikasàna hamono olona, anenjehana an'i Satoshi Uematsu. Uematsu, 27 taona, mpiasa fahiny tao amin'ny Tsukui Yamayuri-en (‘Zaridaina Lily ao Tsukui’) trano fikarakaràna sembana ara-tsaina ao Sagamihara, Prefektioran'i Kanagawa, dia namono 19 tamin'ireo mponina tao sy nandratra 27 hafa tao amin'io trano io ny Talata 26 Jolay 2016 vao maraina be. Ny Alatsinainy 20 Febroary teo, navoaka ny fiampangàna rehefa hita fa manana tsara ny fahafahana ara-tsaina miatrika fitsaràna i Uematsu.
Tsy mbola misy andro voafaritra hanaovana ny fitsaràna aloha hatreto, na voalaza aza fa mety hiatrika fitsaràna sahaninà “mpitsara tsy matianina” i Uematsu. Araka ny nitateran'ny Asahi azy, “Ilay fanadihadiana naharitra fito volana, ka dimy volana tamin'izany no nanaovana fanombanana ny toe-pahasalaman'ny saina, dia niafara tamin'ny : vesatra 19 fiampangàna famonoana olona; vesatra 24 fiampangana fikasàna hamono olona, vesatra roa noho ny fanibohana taminà toerana mitokana tsy araka ny lalàna ka niteraka ratra; vesatra telo momba ny fanibohana taminà toerana mitokana tsy nanaraka ny lalàna; vesatra iray noho ny fidirana tsy nahazoana alàlana; ary vesatra iray noho ny fanitsakitsahana ny lalàna fanarahamaso ny sabatra sy ny basy mipoaka.”
Nitatitra ny tantara daholo ireo gazety goavana ao Japana, saingy izay manahirana angamba dia ny fomba fandrakofana ilay vaovao nataon'ny sasany, raha tsy ny gazety Japoney rehetra mihitsy. Nifantohana betsaka ny momba ny fahasalamana ara-tsain'i Uematsu—volaza fa tratran'ny aretina narcissistic personality disorder (NPD) izy, aretina tsy mahalàla afa-tsy izay ho an'ny tenany ihany—ary tamin'ny fanolorana izay rehetra mety ho azo hanazavana ny antony nanosika azy hanao ilay heloka bevava. Araka ny tatitry ny Yomiuri Shimbun tao amin'ny matoandahatsorany ny 25 Febroary teo, nitohy nandritry ny dimy volana ny fitazonana am-ponja an'ilay rangahy nataon'ireo mpampanoa lalàna hanaovana ny fanombanana ny fahasalaman'ny sainy. Angamba noho ireo mpampanoa lalàna naka fanampahana handinika am-pahamalinana ny raharaha, satria tranga mampiaiky volana sy tsy mahazatra ilay izy.”
Ity tranga ity, raha jerena amin'ny isan'ny maty sy naratra, no vono olona ratsy indrindra teto Japana hatramin'ny Ady Lehibe Faharoa, ka raha raisina amin'izay fomba fijery izay dia heloka bevava “tena mampiaiky volana sy tsy mahazatra” ilay izy. Ny tsy mazava dia ny antony mahatonga ny heloka bevava iray “mampiaiky volana sy tsy mahazatra” hilàna fomba “fitantanana am-pahamalinana bebe kokoa”. Ny azo antoka dia tsy miova noho izay isa maroben'ireo maty sy naratra ny fenitra arahana amin'ny fanangonana porofo, fakàna am-bavany ny voampanga, ary ny fanolorana ny porofo ho an'ireo mpampanoa lalàna mba hanantenana hisian'ny fitsaràna. Ny zavatra tokana, raha ny marina, mety mahatonga ity tranga ity ho tsy mahazatra dia sembana ny ankamaroan'ireo niharam-pahavoazana. Ny hitako ho manahirana ihany koa dia ny fibaribarian'ny filàn'ireo mpilaza vaovao hahita fanazavàna lalindalina kokoa momba ireo fihetsik'i Uematsu, raha raisina ny hoe izy tenany mihitsy no efa nanome mazava ny antony nanaovany izany. Araka ny lazaina ho fibabohana nataony tamin'ny manamboninahitry ny polisy taorian'ny nanatontosàny ilay heloka bevava: “Nataoko ilay izy…. tsara kokoa raha manjavona ireo olona sembana.”
Tsy te-hanisika hevitra aho hoe diso tanteraka ireo media Japoney mampiasa ilay tranga ho entina manasongadina ny faharatsian'ny fandraisana an-tànana ny fikirakirana ny fahasalamana ara-tsaina. Nampidirina tsy araka ny sitrapony hiasa tao amin'ny hopitaly iray i Uematsu tamin'ny volana Febroary 2016, ary andro vitsy monja no nipetrahany tao talohan'ny nanesorana azy. Ny fanantenana hoe hitarika an'i Japàna io tranga io mba handrafitra ‘fomba firotsahana an-tsehatra mialoha’ ho an'ireo marary saina dia fihetsehampo tokony ho hajaina, saingy ny fifantohana fotsiny amin'ny resaka fahasalamana ara-tsain'ilay voampanga dia misarika ny saina tsy hijery ireo niharam-boina, izay marobe amin'izy ireo no tsy ho voatonona akory ny anarany, araka ny hita amin'ny fangatahan'ireo havany. Kanefa, misy ireo media Japoney sasany, toy ny Kazuhiro Nozawa, mpamoaka ny The Mainichi Shimbun, izay mihevitra fa ny tsindrimpeo entin'ireo fandrakofana ilay vaovao dia miresaka ny fitsaratsaram-poana ataon'ny Japoney momba ny fanànana fahasembanana, na fanànana zanaka sembana.
”Ilay voampanga amin'ny raharaha Sagamihara ,” hoy ny voasoratr'i Nozawa, “nahita ireo mpiandry efa reraka miambina ireo sembana mponina tao Yamayuri En, dia tonga tamin'ny fieritreretana hoe “tsy mitondra afa-tsy ho amin'ny fahoriana” ireo olona sembana ary tonga hatramin'ny fanaovana tsoakevitra hoe ny olona tahaka izany dia tokony hovonoina amin'ny alàlan'ny fanafody (euthanized). Na kidaladala aza ny heviny, tsy misy mandà fa ny fitserany an'ireo mpiambina ireo olona tratry ny fahasembanana no mandrafitra ampahany amin'ilay heviny. Ireo tatitry ny vaovao momba ilay tranga ihany koa dia nifototra betsaka tamin'ilay fiarahany miory amin'ireo mpiambina ny niharam-boina.”
Ny fifantohan'ny media tamin'ny mety ho aretina ara-tsain'ny voampanga sy ny fiarahany miory amin'ireo fianakavian'ny niharam-boina dia manisaka ny fifantohan-tsaina tsy ho any amin'ireo niharam-boina, haramin'ny tarik'ireo mpitantana ao amin'ilay toby fikarakarana Tsukui Yamayuri En sy ny anjara andraikitr'izy ireo tamin'ireo famonoana ireo. Araka ny Kyodo News, nifintinin'ny fanadihadiana iray nampanaovin'ny Governemantan'ny Prefektioran'i Kanagawa momba ilay tranga fa hoe “tsy nanefa ny andraikiny araka ny tokony ho izy” ilay toby fikarakaràna, tamin'ny tsy nahavitàny nizara ny fahalalàna izay mety niantraika tamin'ny fiainan'ireo mponina tao aminy. Tohizan'ìilay tattra amin'ny filazàna hoe “raha nifampizaràna vaovao tamin'ny prefektiora, mety ho azo natao ny nisoroka ny fahavoazana…. Raha toa ilay toby nandefa tatitra ho an'ny prefektiora, mety ho afaka nohamafisina ny fitaovam-piarovana na ireo olona mpiambina. Nisy ny olana tao amin'ny fandraisana an-tànana ny olàna nanjo azy.”
Na eo aza ity tatitra mahatsiravina ity, toa tsy hanakiana mihitsy ny fomba nitantànana ilay toby ireo media, ary mbola eo an-toerana ihany hatramin'izao ireo andianà mpitantana tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza, izay tsy mahazatra. Tsara andraisana lesona ny fampitahàna ny fomba nandrakofan'ireo media Japoney ny raharaha Sagamihara amin'ny ‘raharaha Dentsu’. Dentsu dia orinasa Japoney goavana mpanao dokambarotra, izay nametraka fialàna ny filohany, Tadashi Ishii, tamin'ny Desambra 2016, taorian'ny famonoana tena nataon'ny mpiasa iray tao aminy, Matsuri Takahashi, noho ny asa tafahoatra izay zaka nasaina ataony. Ao anatin'izay raharaha izay, ny fitarainan'ny vahoaka sy ny tsindrin'ny media dia nandray anjara tamin'ny ampahany nanery ilay filohan'ny orinasa hametraka ny fialàny. Tsy misy fanerena tahaka izany nampiharina tamin'ireo andianà mpitantana ao amin'ny toby fikarakarana sembana Tsukui Yamayuri En.
Farany, tsy misy na iza na iza te-hamendrofendro ireo fianakaviana nidonam-pahorina. Saingy raha toa ny governemanta Japoney ka tsy mihatsara ivelantsihy momba ny fanatsaràna ny toepiainan'ireo olona manana fahasembanana, taorian'ny raharaha Sagamihara, mila miova ny fomba fitondrantena manoloana ireo olona sembana ao Japàna, ary indrindra indrindra mila esorina ny fitsaratsaram-poana atao amin'izy ireny. Araka ny lazain’‘i Suzanne Kamata, mponina efa elabe tao Japana, niteraka zazavavy manana fahasembanana : “Ny dingana voalohany indrindra mankany amin'ny fametsahana ho anaty fiarahamonina dia ny fahitàna. Ahoana no hahafahantsika misaona ireo izay nolavina ny maha-olona azy? Asehoy anay ny endrik'izy ireny. Lazao anay ny anarany.”
Nasiana fanavaozana ny lohatenin'ity lahatsoratra ity.
Olon'ny oniversite monina ao Kobe i Michael Gillan Peckitt no sady mpanoratra ny e-book “Tantaran'ny Gaijin: Fitantaràna ny Lehilahy Britanika iray Sembana Monina ao Japàna”.